I-Villa Luce **** I-villa yokunethezeka e-Dubrovnik, inkundla yethenisi
Petraca, Croatia, i-Croatia
I-Villa Luce iyi-villa yesimanje kanokusho etholakala imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha elinomlando laseDubrovnik kanye nebanga lemizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseDubrovnik.
Ngaphansi kwamaminithi angu-7 ukusuka ogwini olunesihlabathi oluseduze.
I-Luxury villa i-Luce itholakala eMlini, eduze nedolobha elihle laseDubrovnik. I-villa itholakala endaweni engu-2000 m2 futhi inomnyango wangasese ohlinzeka wena nomndeni wakho ngobumfihlo obudingayo.
Ku-250 m2 yendawo yokuhlala, i-Villa Luce inikeza ngaphezu kwakho konke indawo yokuhlala enethezekile nenethezeka yezivakashi eziyi-10 + 2.
Inamakamelo okulala amahlanu anombhede ophindwe kabili ongahlukaniswa uma kunesidingo, (imibhede emibili eyengeziwe iyatholakala ukuze uthole izivakashi ezengeziwe), amagumbi okugeza ayi-5 abanzi ane-en-suite aneshawa yokungena kanye nendlu yangasese eyodwa ehlukene.
Esitezi esiphansi se-villa kukhona ikhishi elihlome ngokuphelele, elincane elinendawo yokudlela kanye negumbi lokuhlala elihlotshiswe ngokuthakazelisayo.
Bheka ukuqabuleka ekushiseni kwehlobo echibini elichichimayo elingu-68 m2. Uma ufuna ukuzijabulisa, kukhona inkantolo ye-badminton yangasese onayo, kanye nezinto ezisetshenziswayo ezingasetshenziswa ukudlala i-volleyball. Ukunikezwa kwe-villa kuhlanganisa izindawo zokupaka ezizimele ezi-4.
I-ID yento: ctdu308
Iminikelo eyengeziwe: Ibhodi loku-ayina, isidlali seDVD, ihhavini, iMicrowave, isitofu, umenzi wekhofi, umshini wokuwasha izitsha, isiqandisi, isiqandisi, i-Vitro ceramic, i-Fan / extractor, i-Toaster, iketela lamanzi, izitsha zasekhishini ezinikeziwe, Ivulandi/idekhi/Terrace, I-BBQ Grill, Ishawa , I-WC Ehlukile, Izingane zamukelwa, Ukubukwa kwentaba, Ukubhema kuvunyelwe ngaphandle, Ingadi yangasese, I-TV Enikwe amandla I-inthanethi, Inkundla yethenisi , Umtapo wolwazi, Igumbi lokugezela, Ithoyilethi, Umbhede, Igumbi lokulala, Impahla, Igumbi lokuhlala, Indawo yokuhlala, Indawo yokudlela, Indawo yokuhlala, Ugesi , Amanzi
Indawo yaseMlini yaqanjwa ngenxa yezigayo eziningi ezakhelwe phezu kwemifudlana emihle emangalisayo egeleza kuleyo ndawo. Jabulela ubumfihlo obuhlinzekwe ngendawo enhle ye-villa kanye nobuhle bendawo enhle noma ikhanda eliya eDubrovnik, iparele lase-Adriatic, okunikezwayo okuhlaba umxhwele kuzokushiya uphefumulelwe. Amagugu acebile amasiko nomlando, izinto ezibukwayo, ama-promenade, ukunikezwa okukhethekile kwezindawo zokudlela nemigoqo, amabhishi ahleliwe, ahlanzekile nanakekelwa, ulwandle oluhlanzekile, umoya ohlanzekile wasolwandle, ubuhle bemvelo, uhambo losuku oluya eziqhingini ezidumile emhlabeni wonke zaseCroatia kuyingxenye yesifunda saseDubrovnik. Unganqikazi, ziphathise eholidini ozolikhumbula!
Indawo enhle esogwini, ukusuka eRijeka Dubrovačka kuya eNeum nasePelješac, enogu oluthambile nolunamadwala olucebile ngamatheku emvelo, nengxubevange yezihlahla zikaphayini neminqumo, izivini namadwala aseMedithera ambozwe amahlathi, futhi iyikhaya labantu abadumile. umdanso wentukuthelo obizwa ngokuthi "Lindo" kanye ne-100- isiko lenganekwane laminyaka yonke elibonakala ngemvunulo enhle yabantu.
Eduze kwaseduze: Ukubuka, Ukuthenga, Izindawo zokudlela, Amasinema/amathiyetha wamamuvi, Amamyuziyamu, Amatiyetha, amahholo ekhonsathi, I-spa yezempilo/ubuhle, Izitolo zasendulo, Isikhungo sokufaneleka/ijimi, Igalofu, Ithenisi, Ezemidlalo Zamanzi, Ukubhukuda, Ukuhamba Ngebhayisikili, Ukugibela intaba, Ukudoba, Imasaji, iKayaking, Yoga, Cycling, Jet skiing, Sailing, Hospital
Hlola ezinye izinketho ezise- Petraca namaphethelo